7 nke njehie WhatsApp kachasịkarị na ngwọta ha | Akụkọ akụrụngwa
7 nke njehie WhatsApp kachasịkarị na ngwọta ha
WhatsApp Ọ bụ taa ngwa ngwa izi ozi kachasị eji eme ihe n'ụwa niile, ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị ọzọ dị ka Telegram ma ọ bụ Line na-arụ ọrụ na-eduga, ọ bụ ezie na ịgakwaghị ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ejiri ọrụ Facebook. O di nwute na WhatsApp ka bu ngwa nke na-enye anyi nsogbu na isi isi, nke taa anyi ga-agbali idozi.
Imirikiti nsogbu anyị na-ezute na WhatsApp bụ ihe zuru oke na ọtụtụ n'ime ha nwere ngwọta dị mfe. Site n'isiokwu a, anyị ga-egosi gị 7 nke njehie WhatsApp kachasịkarị na ngwọta ha, nke mere na ọ bụrụ na ọdachi dakwasị gị otu ma ọ bụ karịa n’ime ha, ị ga-edozi ya ngwa ngwa n’emeghịkwa ka ndụ gị sikwuo ike.
1 Enweghị m ike ịwụnye WhatsApp
2 Ndi ana-akpo m egosighi na WhatsApp
3 A na-ebudata vidiyo ndị ahụ n'onwe ha ozugbo data nke ọnụego anyị ejirila
4 Anaghị m anụ olu ndetu
5 M na-eche ma na-eche ma mgbe na-anata ebighị koodu
6 Enweghị m ike ịhụ njikọ ikpeazụ maka kọntaktị
7 Oku olu dị oke mma
Enweghị m ike ịwụnye WhatsApp
Ihe niile ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwere ama chọrọ ịwụnye WhatsApp ozugbo ha gbanyere ya iji nwee ike ịkọrọ ndị ezinụlọ ha ma ọ bụ ndị enyi ha. O di nwute, obughi onye obula nwere ike iwunye ngwa ngwa ngwa ngwa na onu ogugu ha, obu ezie na o nwere ike ibu n'ihi otutu ihe.
Nke mbụ nwere ike ịbụ n’ihi na i nwere ụfọdụ nsogbu na nọmba ekwentị gị, na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ n'ụzọ ziri ezi. Nke abụọ nwere ike ịbụ n'ihi na ị taa ahụhụ mmachibido iwu, nke nwere ike ịbụ n'ihi ihe dị iche iche, ọ nwere ike ịdị mfe ma ọ bụ sie ike ịpụ na ya-
Ọ bụrụ na ịnọghị na nke ọ bụla n'ime ikpe abụọ anyị kọwara, ọ ga-ekwe omume na ịnweghị ike ịwụnye WhatsApp n'ihi na ụdị sọftụwia nke ngwaọrụ mkpanaka gị dakọtara na ọrụ ahụ. Ọmụmaatụ Ọ bụrụ na ị jiri ekwentị nwere sistemụ arụmọrụ nke gam akporo 2.2 ma ọ bụ obere, agbalịrị ya n'ihi na ị gaghị enwe ike ịwụnye ya, site a nkịtị usoro n'agbanyeghị otú ike ị na-agbalị.
Ndi ana-akpo m egosighi na WhatsApp
Nke a nwere ike ịbụ njehie kachasị dị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ niile ataala ahụhụ na WhatsApp. Ma ọ bụ na ọ dịghị onye nweere onwe ya mgbe ị na-etinye ngwa ahụ, anyị na-anwa ịnweta kọntaktị anyị na enweghị, n'agbanyeghị ugboro ole anyị melite. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi na ị na-ebuwanye kọntaktị gị site na akaụntụ Google ma ọ bụ n'ihi na ọ bụghị otu kọntaktị echekwara ozugbo na kaadị SIM gị ma ọ bụ na ekwentị gị.
Ọ bụrụ na ị nwere kọntaktị gị echekwara na akaụntụ Google gị, ị ga-emekọrịta ha n'ụzọ ziri ezi, ka ha wee pụta na WhatsApp. Gaa na Ntọala, wee gaa Akaụntụ na n'ikpeazụ gaa Google iji mee ka mmekọrịta ahụ rụọ ọrụ yana ya na kọntaktị kọntaktị gị niile.
Ọ bụrụ na ịnweghị nkwado ndabere nke kọntaktị gị, ma na Google ma ọ bụ na uzọ ọzọ, ị ga-eji aka weghachite ha, ka ha wee pụta na WhatsApp.
A na-ebudata vidiyo ndị ahụ n'onwe ha ozugbo data nke ọnụego anyị ejirila
Ọ dịghị onye na-ahapụ ụlọ na-enweghị ebu ngwaọrụ mkpanaka ha n'akpa ma ọ bụ obere akpa ha, ha abụrụla akụkụ bụ isi nke ndụ anyị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ data anyị nwere. Na-enweghị data enweghị ike ịkpọtụrụ netwọkụ mmekọrịta anyị, ma ọ bụ jikwaa WhatsApp na ọsọ ụfọdụ.
Otu n'ime njehie, ma ọ bụ kama otu nsogbu anyị nwere ike ịchọta na WhatsApp, bụ nke akpaka nbudata nke vidiyo ma ọ bụ foto, nke na-eduga na data oriri, mgbe ụfọdụ ọ dịghị mkpa. Ma ọ bụ na onye na-enweghị ụdị enyi, ma ọ bụ n'ime nnukwu ìgwè ahụ, nke ha na-ezitere anyị vidiyo na-aga n'ihu na foto nke ihe niile na-eme ha ụbọchị niile.
Iji gbochie ibudata vidiyo ma ọ bụ ihe oyiyi na akpaghị aka, ị ga-agbanwe ya na ntọala WhatsApp, ma gbanwee ya ka ọ bụrụ na ebudatara ha naanị mgbe anyị jikọtara na netwọk WiFi. Buru n'uche na ọtụtụ ụlọ ọrụ ekwentị na-akwụ ụgwọ maka data karịrị akarị, yabụ anyị ga-elekọta oke nke ndị ha na-enye anyị maka ọnụahịa mbụ nke ọnụego anyị.
Anaghị m anụ olu ndetu
Anyị niile na-eziga ma nata ndetu olu kwa ụbọchị ma ọ nweghị onye nwere obi abụọ ọ bụla gbasara otu esi eme ya. Ihe otutu ndi mmadu amaghi bu na WhatsApp na-eji ihe nnochi nso nke ngwa mkpanaka gi belata olu nke olu mgbe o choputara aru di nso. Nke a pụtara na oge ọ bụla ị ga - eweta akara gị na ntị gị iji nụ olu ncheta olu, ị naghị anụ ihe ọ bụla.
Iji dozie nsogbu a, ị kwesịrị ị gbalịa ka ị ghara iweta ekwentị gị na ntị gị ma ọ bụ akụkụ ọ bụla nke ahụ gị, ma ọ bụ jiri ekweisi nke ahụ ga - enyere gị aka ige ntị na ndetu olu na - enweghị nsogbu ọ bụla ma kachasị ike idebe nzuzo gị na onye ọ bụla ọzọ.
Ọ bụrụ na enweghị ụzọ ị ga-esi anụ ụda olu ahụ, buru n'uche na ọkà okwu nke ngwaọrụ mkpanaka gị nwere ike ịda mba n'ihi ya ị gaghị enwe nhọrọ ọ bụla ma ọ bụghị iji ya gaa ọrụ ọrụ aka na njehie ahụ enweghị ihe ọ bụla gbasara ya. Lee na WhatsApp.
M na-eche ma na-eche ma mgbe na-anata ebighị koodu
Iji malite iji WhatsApp, ọ dị mkpa ka ị rụọ ọrụ akaụntụ gị site na SMS. Izi ozi ozigbo onwe ya na-achọpụta ozi ederede anatara ma anyị agaghị emepe ngwa Ozi ọtụtụ oge. Na mgbakwunye, ruo oge ụfọdụ anyị nwekwara ike rụọ ọrụ akaụntụ anyị site na ịnweta oku, site na nke ha ga-enye anyị koodu anyị.
Mgbe ụfọdụ, SMS na koodu ntinye anaghị abịa n'agbanyeghị oge anyị chere, ọ bụ ezie na anyị ga-enwe ike ịmalite site na oku olu, nke na-enyeghị ọtụtụ ndị ọrụ obi ike n'agbanyeghị na ọ dị mma kpamkpam. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe gị, lelee na ị nwere kaadị SIM etinyere na ọnụ gị nke na-enye gị ohere ịnweta SMS ma ọ bụ na ị debere nganiihu nke mba gị iji zipu koodu mmeghe.
Enweghị m ike ịhụ njikọ ikpeazụ maka kọntaktị
Ọzọ njehie kachasị na anyị nwere ike ịchọta na WhatsApp bụ nke ahụghị oge nke njikọ ikpeazụ nke otu kọntaktị anyị, ihe bara ezigbo uru maka ndị niile na-agba asịrị site na okike. Agbanyeghị, anyị nwere ike ghara ihu mmejọ ma ọ bụ ya bụ na ọrụ ozi nzipu oge ahụ enyela anyị ohere imezigharị ihe nzuzo ruo ogologo oge ma debe oge nke njikọ ikpeazụ anyị.
Site na Ntọala na ịnweta Akaụntụ anyị nwere ike ịhọrọ ma anyị chọrọ igosi ụbọchị na oge nke njikọ ikpeazụ anyị. N'ezie, buru n'uche na ọ bụrụ na anyị ekweghị ka egosi njikọ ikpeazụ anyị, anyị agaghị ahụ nke ndị anyị na-akpọtụrụ.
Ọ bụrụ n'ịhụghị oge njikọ ikpeazụ nke kọntaktị gị, echegbula onwe gị, ọ bụghị njehie WhatsApp, mana ị nwere nkwarụ ohere nke igosipụta ụbọchị na oge nke njikọ ikpeazụ gị. Naanị site na ime ka ọ rụọ ọrụ, ị ga-enwe ike ịhụ ma gbaa asịrị n'oge oge ejikọrọ kọntaktị gị, mana buru n'uche mgbe niile na ha ga-ahụkwa nke gị na enweghị mgbochi ọ bụla.
Oku olu dị oke mma
WhatsApp na-enye ndị ọrụ niile ohere ịme oku oku, nke emere site na iji ọnụọgụ data anyị ma ọ bụ njikọ WiFi. Ọ bụrụ n'ịchọpụta na oku ị na-akpọ ma ọ bụ na-anata bụ nke adịghị mma nke ukwuu, ọ bụ n'ihi nnukwu njikọ Internetntanetị.
Idozi njehie a, dị nnọọ ị kwesịrị ị na-achọ a mma njikọ na netwọk nke netwọk. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ oku oku ka inwe ezigbo mma, ị kwesịrị ịnwale ijikọ na netwọki WiFi oge niile n’ ihi na otu ọzọ ihe kachasị dị mma bụ na ha nwere ogo dị ala. Ọ bụrụ na ịnweghị ohere ịnweta netwọk WiFi, ị kwesịrị ịnwale ma ọ dịkarịa ala ịnwa ijikọ na netwọk 4G, ọ bụ ezie na ị ga-eburu n'uche na ị dataụ data nke ụdị oku a na-adịkarị elu.
Site n'isiokwu a, anyị enyochala ụfọdụ njehie ndị kachasị na WhatsApp, na-atụ aro ihe ngwọta, dịkwakarịsịrị. Ọ bụrụ n'ịchọta njehie na-abụghị na ndepụta a, ịnwere ike ịga na ibe enyemaka nke ngwa izipu ozi nwere ike ịnweta site na peeji nke gọọmentị ya.
Ọzọkwa ma ọ bụrụhaala na anyị anaghị eche ihu na mbibi ọdachi ma ọ bụ na ị maraworị na ọ nweghị ngwọta, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị ma anyị ga-anwa inyere gị aka na ya, ruo na ike anyị.
You jisiri ike dozie njehie nke WhatsApp laghachiri gị site na edemede a?. Gwa anyi na oghere edere maka ịza ihe na post a ma obu site na otu netwọkụ nke ndi mmadu nọ n’ime anyi, na njikere inye gi aka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » 7 nke njehie WhatsApp kachasịkarị na ngwọta ha
Iji dozie nsogbu ndị a na-enwekarị na WhatsApp m na-eji ngwa a m na-egosi gị; https://play.google.com/store/apps/details?id=faq.whatsapphelp&hl=es
maka m ọ bara ezigbo uru ma dịkwa mfe iji, ana m akwado ya.
Nke a bụ ihe aquarium robot dị ka HEXBUG AQUABOT jelii
Ihe dị na Galaxy Note 7 meghere maka ngwa niile